10 mitemo inofanira kutevedzerwa kuti uwane
Mari, Personal Finance
Tiri kurarama munyika umo tiri nguva dzose mashoko matsva. Panyaya mashoko ari oga dzemari, zvakanaka kuti ishande zvikuru nyore mitemo. Edza kunzwisisa zvemari Zen. Teerera nyore chokwadi kuti ichakubatsira kuponesa mari. Uchava vabudirire uye anogona kushumira muenzaniso vamwe. Kana mari - chinangwa chako, unofanira kuziva izvi gumi mitemo!
Pasina zvinangwa zvakajeka zvakaoma kuongorora, zvinoita sokunge rako kubudirira mari pachako. Iva chinangwa chaicho, uye ipapo kutanga chirongwa, iyo danho nedanho kuchakubatsira kuita zvawaronga.
Kusiyanisa pakati wekushaiwa uye zvinodiwa
Kana iwe havanyatsonzwisisa zvido pamwe nezvinodiwa zvakaoma kuti vawane mari isimbe. Human zvinodiwa chaizvo nyore: zvipfeko, zvokudya, pokugara, utano, uye zvifambiso yakavimbika. Zvimwe zvose - chido ichi. izvi zvose hazvirevi kuti unofanira chete iwe kuti zvachose zvose, uye dzimwe nguva unogona akomborera pachako, zvimwe upenyu hwaizova kufinha. Just vanofanira kukwanisa kusarudza nokungwaririra uye kwete kubvumira muedzo achitsungirira kuchera nzvimbo yaro zvemari.
Rarama nezvinhu zvaunazvo
Kana unogona kuva mari nemari uye kurarama mukati nezvatinowana, ndiko, usapedza kupfuura iwe uwane, muchava vakasununguka kubva anorura denderedzwa basa, kunyanya mari, chikwereti uye kushanda zvakare. Kudzidza kurarama mukati nezvatinowana - pachako kubudirira, asi kana iwe uchiri kushandisa kuisa parutivi, ndiko kubudirira chaiko! Mari akavaka hwaro ramangwana rako.
Tanga akarara mangwanani
Panyaya nemari, nguva - shamwari yako yepamwoyo. Tanga mari kare achiri muduku, uye zvichava nyore kuti vaunganidze uwane, kunyange kana uine mwero mari. Uyezve, kufarira kuchaita -wedzera zvaitoshamisa.
Iwe kubhadhara iwe kutanga
Pane zvikonzero zvakawanda kusarudza kutanga kushandisa mari uri woga mari dzavo. Chokutanga, hamuna sarudzo, kunyange kana iwe pachako zviise ezvinhu akadaro. Kana iwe pakarepo uchatamisa mari kubhangi, muedzo kuipedzera akangosiyiwa zvawo kunova duku. Ndokusaka nyanzvi zano mari iri pamwedzi hwaro pakutanga. Unogona kunyange muenzaniso otomatiki kuchinjirwa kune nhoroondo.
Kudzidza kusiyanisa zvinhu uye chikwereti
Your zvinhu - zvose zvinhu zvenyu, iyo ine ukoshi. Ndiyo motokari yako, wako imba uye nhoroondo yako. Chikwereti - nechiyero pamusoro makadhi, mbiri kudzidza, uye motokari, kutengwa Yakabudiswa. Edza kuunganidza pfuma, uye zvishoma nezvishoma bvisai zvikwereti.
Dzivisa zvikwereti nevatengi
Regai rwezvemabhengi kushambadza usanyengedzwa: inoenzanirana kunonyanyisa kwaunoita kadhi - ichi hachisi nevatengi simba renyu. Musaedza kupinda zvikwereti, zvimwe muchimirira tsitsi mubereko prices. izvi zvose kurerutsa bhajeti yenyu uye akakupa vawane mari pakusimba, sezvo zvikwereti zvakadai hazvikuvadzi chete pakutanga kuaona.
Kubhadhara chikwereti chine mari yechimbadzo yakawanda kutanga
Kana usingagoni kudzivisa zvikwereti mutengi, funga muripo wavo nzira. Rokutanga kubhadhara kure chikwereti, vane yechimbadzo yakawanda, izvozvo achaponesa iwe mari. Mune ramangwana, edza kugara kure zvikwereti kuti kukwirira munhu chikamu.
Regai mari kana Hamunzwisisi musimboti
Kuti abudirire bhizimisi, unofanira kufunga zvakajeka, kuva vakarangwa munhu uye kuita nguva dzose. Not chakakodzera bhizimisi iri, kana iwe hauzivi chii chichava refu tarisiro uye kuti mugogona kubuda izvi. Rega chete chii kunzwisisa, kudzidza uye ichishanduka ose zuva, usarega pamusika nokufamba unozvidzinga iwe.
Isa six- kana masere mari chete kana. Iri nyore uye kubudirira uzvidzivirire kana kurasikirwa nebasa, chisingatarisirwi zvoutano, kuvariritira uye zvimwe zvinetso upenyu dzinogona kukanganisa kwako zvakanaka. Usatya kuronga, funga pamusoro wako vadiwa uye kuita kuda. Haizi murima, sezvachiri akangwara. Saka iva nechokwadi kuti naro zvaunonyora uye kuzviita nokukurumidza.
Mikana kwazvo karukureta Deposit
Unoda kuziva sei kuwana map "Corn"?
Gross muhoro - ndiwo sei?
Kubva superyachts kune zvinyorwa da Vinci: 13 "matoyi" coolest yeshoroma
How kuisa mari parunhare mumari Bank kadhi? Tips uye mazano
Qiwi zvemagetsi chikwama - chii?
Kiturami zvigadzirwa: Diesel bhaira. Description, unhu, marudzi uye ratings
Tesla Motors paanounza update "autopilot" kuti achadzivirira uye kufambisa kudzora muchina
Temple Mutsvene Cross. Temple musi evasingatombonamati pomupata: mapikicha, nhoroondo, kunamata purogiramu
Ndechipi smartphone ane simba bhatiri zvakanakisisa kusarudza?
Lavender: kudyara uye hanya namafuro. Professional zano
Vaingoerekana munhu - munhu ratyama kana kushinga?
Munda chikumbiro, uye zvivako zviri Tungsten fomura
Makomo Tajikistan: rondedzero uye mifananidzo
Priest Alexei Uminsky: Biography, mhuri, vana, Photo
Kukuvadza uye zvakanakira yakabikwa mvura. Akadzokorora kufashaira mvura
Multivarka 'Moulinex' - chizvarwa chitsva kicheni robhoti